Kyawt Kyawt San's Likes - Myanmar Network
Kyawt Kyawt San's Likes
Back to Kyawt Kyawt San's Page
ဗြိတိသျှကောင်စီမြန်မာမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော UK… ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော UK ပညာရေးပြပွဲတစ်ရပ် ကို ရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တွင် မတ်လ ၂၂ ရက် မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၆ နာရီအထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ အဓိက ပါဝင်ကူညီပေးထား… Discussion ဗြိတိသျှကောင်စီမြန်မာမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော UK… 21 Likes
Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwa… [Zawgyi] What are the benefits of positive thinking? Benefits of positive thinking အကြောင်း မဆွေးနွေးမီ "What is positive thinking?" ကို ရှေးဦးစွာ စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ "Positive thinking is to loo… Discussion Benefits of Positive Thinking by Daw Tin Nwa… 53 Likes
တန်ဘိုးအကြောင်းတွေးကြည့်ခြင်း တစ်နေ့……၊ အဲဒီတစ်နေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ lexus ကားကြီးကိုမောင်းပြီး လူ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား ၊ မြင်းလှည်း စတာ တွေ အင်မတန်းရှုပ်ထွေးလွန်းလှတဲ့ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ထဲကို ၀င်လာမိပါတယ်။Lexus ကားကို ကိုယ်တိုင် မောင်ြး… Discussion တန်ဘိုးအကြောင်းတွေးကြည့်ခြင်း 43 Likes
J@M - Episode4- An Interview * Click on the picture to seealarger image. ပုံကြီးကြည့်လိုပါက အထက်ပုံပေါ်တွင် click လုပ်ပါ။ Jam: The Web Design Company that Teaches You English 3. လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်း (An Interview) Sanjeev တစ… Discussion J@M - Episode4- An Interview 34 Likes ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ ဘာလို့ ထိထိရောက်ရောက် တွေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်တာလဲ ဆိုရင် အချိန်မရလို့ပါ .... ခေတ်ကြီးက အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြေးနေပြီ ... မှန်ဖို့သာမ က မြန်ဖို့ပါ လိုလာပြီ... ထိရောက် ဖို့… Discussion ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် တွေးကြမလဲ 125 Likes Phrases, their meanings and origins (2) A dog isaman's best friend (လူသား၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ) လူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကို man’s best friend လို့သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်တွေထဲမှာမှ ခွေးဆိုတဲ့သတ္တ၀ါဟာ သခင့်အေ… Discussion Phrases, their meanings and origins (2) 28 Likes
အရေးကြီးသည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော လျှို့ဝှက်ချက်… လျှို့ဝှက်ချက် (၁) တွေးတောခြင်း မပြုပဲ အင်္ဂလိပ်စကားကို အလိုအလျှောက်ပြောခြင်း စကားလုံးများသည် မိမိ၏ ပါးစပ်အတွင်းမှ အလိုအလျှောက်လွယ်ကူစွာထွက်လာခြင်းတို့သည် ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့လာသူတိုင်း… Discussion အရေးကြီးသည့် အင်္ဂလိပ် စကားပြော လျှို့ဝှက်ချက်… 245 Likes